पायल्सका बिरामीले यी चिज नखानुस्
पायल्सबाट धेरै मानिसहरु पीडित भएपनि खुला रुपमा जो कोहीलाई भन्न सकेका हुँदैंनन्। केही उपचारले ठीक भएजस्तो भएपनि फेरि यो समस्या पुनः दोहोरिन्छ। तर खानपान र जीवनशैलीको परिवर्तनबाट पनि यसको समस्याबाट धेरैमात्रामा बच्न सकिन्छ। पायल्सबाट बच्न कस्तो खाना खानु हुँदैंन, थाहा पाउनुस्। धेरै तेलयुक्त र मसालायुक्त भोजनअत्यधिक तेल या मसाला भएको खाना पायल्सको समस्या भएकाहरुलाई हानीकारक हुन्छ। यद्यपि पायल्स नभएकाहरुलाई पनि डाक्टरहरु यस्तो खाना नखान सल्लाह दिन्छन्। पहिल्यैदेखि पायल्सको समस्या छ… पुरा पढौ
विशाल कोअपरेटिभ संस्था लिमिटेड पोखरा ४ बुद्ध विशाल बजारका सदस्यले पोखरा सभागृहचोकमा रहेको युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रालि(युआरएल)मा रक्त जाँच गर्दा छुट पाउने भएका छन् । युआरएलमा हुने सबै रक्त परीक्षणमा ३० प्रतिशत छुट हुने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा विशाल कोअपरेटिभका अध्यक्ष भुवन नेम्कुल र युआरएलका प्रबन्ध निर्देशक ठाकुरप्रसाद पन्तले बिहीबार हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सम्झौता २ वर्षसम्म मान्य हुनेछ । विशाल कोअपरेटिभमा ३ सयभन्दा बढी सेयर सदस्य छन्… पुरा पढौ
थाइराइड सम्बन्धि समस्या- डा. रवीन्द्र पाण्डे
के तपाईंलाई ८-१० घन्टा सुते पनि दिनभर निन्द्रा नपुगेको जस्तो क्लान्त अनुभव हुन्छ ? वा रात्रिमा निन्द्रा पर्दैन ? तपाईंले खानपिन, शारीरकि अभ्यास, उपचार आदि गरे पनि शरीरको तौल परविर्तन भएको छैन ? वा बिनाकारण अचानक धेरै तौल घटेको वा बढेको छ ? के तपाईंको डिप्रेसन वा चिन्ता उक्त रोगको औषधीले निको भएको छैन? खानपिनमा पहरेज, अभ्यास एवं औषधीले पनि तपाईंको कोलेस्ट्रोल घटेको छैन ? वा ज्यादै न्यून कोलेस्ट्रोल छ… पुरा पढौ
प्रधानमन्त्रीको स्वस्थमा गडबढ ? के भयो उनलाई ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली अस्वस्थ भएका छन् । ओलीलाई गएरातिदेखि नै झाडा पखाला लागेपछि उन अस्वस्थ बनेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय स्रोतका अनुसार झाडा पखाला नरोकिएपछि प्रधानमन्त्री सिंहदरबार कार्यालय गएका छैनन् । सबै राजनीतिक भेटघाट स्थगित गरिएका छन् । बालुवाटारमै चिकित्सक बोलाएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । ओली अहिले औषधि सेवन गरेर आराम गरिरहेका छन् । पुरा पढौ
हेलिकप्टरबाट आमा र शिशुको उद्धार
शल्यक्रियापछि जन्मिएका शिशुको मुटुको गति असामान्य भएपछि उपचारका लागि हेलिकप्टबाट पोखरा लगिएको छ । ढोरपाटन नगरपालिका–९ बोबाङकी २१ वर्षीय कमला विक र उनको नवजात छोरालाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको हो । व्यथाले च्यापेर गम्भीर अवस्थामा बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आएकी विकलाई बुधबार शल्यक्रिया गरेर प्रसूति गराइएको थियो । डा कृष्णहरि श्रेष्ठ र डा दिलीप कोजुलगायतको टोलीले शल्यक्रिया गरेको थियो । शल्यक्रियापश्चात जन्मेका विकका नवजात छोराको मुटुको गति असामान्य भएपछि चिकित्सकले तत्कालै… पुरा पढौ
सञ्जेल पत्नी सहित तिन जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा
समता अस्पतालका सञ्चालक उत्तम सञ्जेलकी पत्नी सहित तिन जना विरुद्ध प्रहरीले कर्तव्य ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अगाडी बढाएको छ । अस्पातल भित्रै यही असार ३ गते २ महिनादेखि अस्पतालमा क्लिनरको रुपमा काम गर्दै आएकी रामेछापको दोरम्बा घर भएकी २७ वर्षीया बिमला तामाङले अस्पताल भित्रै झुण्डिएको अवस्थामा फेलापछि उनिहरुविरुद्ध मुद्धा अगाडी बढाइएको हो । बिमलाले सुसाईड नोटमा सञ्चालक उत्तम सञ्जेलकी श्रीमती र अन्य २ जनाको नाम किटानी गरेरै लेखेपछि उनीहरु प्रहरी खोरमा पुगेका… पुरा पढौ
बागलुङमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
बुद्धचित्त आयुर्वेदाको आयोजनामा बागलुङ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन हुने भएको छ । शिविर यहि असार १७ र १८ गते संचालन हुने आइतबार बागलुङमा पत्रकार भेटघाट गरि जानकारी गराइएको हो । शिविरमा पेट सम्बन्धी रोग, हाडजोर्नी तथा नशा रोग, छाल रोग, मानसिक रोग, नाक तथा घाँटी सम्बन्धी रोग, यौन समस्या सम्बन्धी रोग, महिला सम्बन्धी रोग लगायत विभिन्न रोगहरुको निःशुल्क चेक जाँच गरिने बुद्धचित्त आयुर्वेदाका संयोजक शिवराज तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । शिविरमा… पुरा पढौ
मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा कति चिकित्सक र नर्स उत्तीर्ण भए ?
विशेषज्ञ चिकित्सकको नाम दर्ता परीक्षामा ६३ प्रतिशत चिकित्सक मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शनिबार लिएको पोष्टग्राजुएट्स तह (पिजी)अध्ययन पूरा गरेका ३४२ जना चिकित्सक सो परीक्षामा सहभागी भएका थिए । तीमध्ये २१७ जना मात्र उत्तीर्ण र १२५ जना अनुत्तीर्ण भएका काउन्सिलले जनाएको छ । नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सञ्चालित सो परीक्षामा तीन जना चिकित्सक अनुपस्थित रहेका थिए । यसैगरी नेपाल नर्सिङ परिषद्ले शनिबार नै लिएको नर्सिङ… पुरा पढौ